काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका –८ स्थित सुन्दरवस्ती भंगालमा नौलिन स्पोर्टस् भिल्ला सञ्चालनमा आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका दुई वटा डबल र एउटा सिंगल टेनिस कोर्टसहितको नौलिन स्पोर्टस् भिल्ला शनिबार सञ्चालनमा आएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री कमल थापाले मनोज राणासँग टेनिस खेलेर स्पोर्टस् भिल्लाको शुभारम्भ गर्नुभयो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा काठमाडौं–४ मा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारहरु नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, नेकपा एमालेका डा. राजन भट्टराई र विवेकशील साझा पार्टीकी शुबुना बस्नेत, नेपालमा टेनिस खेल भित्र्याउने ९० बर्षिय हेम लामा, वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
१ करोड २५ लाख रुपैयाँको लागतमा ६ महिना लामो समय लगाएर तयार पारिएको स्पोर्टस भिल्लामा विहान छ बजेदेखि नौ बजेसम्म टेनिस खेल्ने सुविधा छ । प्रापिटसहितको टेनिस कोर्टमा लाइटको समेत व्यवस्था छ । नौलिन स्पोर्टस् भिल्लाका प्रबन्ध निर्देशक किशोर थापाले टेनिस खेलाडीहरुको संख्या बढिरहेको र स्वस्थ्य रहनका लागि टेनिस खेल्नेको संख्या पनि बढेको तर स्तरीय कोर्टको अभावमा उनीहरु सामान्य कोर्टमा चित्त बुझाउन वाध्य भएका कारण प्रशिक्षकहरुको सुझाव अनुसार अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित कोर्ट बनाएको बताउनुभयो ।
५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको स्पोर्टस् भिल्लामा खेलाडीहरुका लागि तीन जना प्रशिक्षक र आवश्यक संख्यामा बल ब्वाइको व्यवस्था गरिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री कमल थापाले निजीस्तरबाट अन्र्तराष्ट्रियस्तरको कोर्ट निर्माणले टेनिस खेलको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो । पर्याप्त पार्किङ रहेको स्पोर्टस भिल्लामा गाडी धुने सुविधा समेत उपलब्ध छ ।
स्पोर्टस् भिल्लाले वार्षिक सदस्यता लिनेका लागि ४५ हजार तथा अन्यका लागि घण्टाको तीन सय रुपैयाँ शुल्क तय गरेको छ । स्कुल र कलेजका विद्यार्थीहरुका लागि भने छुट गरिने प्रबन्ध निर्देशक थापाले बताउनुभयो ।
स्पोर्टस् भिल्लामा टिनिस खेलका लागि आवश्यक सामाग्री पनि उपलब्ध छन् । खेलाडीहरुको माग अनुसार अन्य सुविधा क्रमशः थप गरिने प्रबन्ध निर्देशक थापाले बताउनुभयो । स्पोर्टस् भिल्लाको उद्घाटनका क्रममा टेनिसका प्रशिक्षक रामबहादुर तामाङलाई नगद १० हजार रुपैयाँसहित सम्मान गरिएको थियो ।
प्रशिक्षक लामाले तीन वटा कोर्टसहितको स्पोर्टस् भिल्ला सञ्चालनमा आएसँगै कमजोर गुणस्तरका कोर्टमा पनि टेनिस खेल्न पालो पर्खनुपर्ने अवस्था न्युनिकरण गर्न ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले स्पोर्टस् भिल्लाबाट स्तरीय खेलाडी उत्पादनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको पनि बताउनुभयो ।
साग लक्षित विशेष प्रशिक्षण शुरु, १६ प्रशिक्षकले प्रशिक्षण दिँदै
योङ बोइजसँग हारेपनि नकआउट चरणका लागि उत्साहित रोनाल्डो
‘ए’ डिभिजन लिग : मनाङको उपाधि यात्रा सहज, आर्मीकाे कमजोर
शहीद स्मारक ए डिभिजन फुटबल–पुलिसद्वारा फ्रेण्ड्स पराजित
इपिएल टि–२० क्रिकेट , पोखरा बाहिरियो
विश्व नेत्रहिन क्रिकेट परिषद्को अध्यक्षमा भारतका माहन्तेश चयन, कोषाध्यक्षमा नेपालका पवन घिमिरे